Satoshi Nakamoto – Bitcoin, ngọngọ Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, isi oche ndepụta nke kasị akpa mmadụ ndị meworo kasị ukwuu onyinye na kaadị ụlọ ọrụ. N'okpuru na-adịbeghị anya nwale nke quartz, n'oge Satoshi Nakamoto nwere site 980,000 ka 1 nde bitcoins. na December, bitcoin si amaghị kere ga-ama $19.4 ijeri ma ọ bụ ndidi 44th ogaranya onye na ụwa. Ọ bụrụ na bitcoin ghọrọ a zuru ụwa ọnụ ego, Satoshi Nakamoto eleghị anya ga-abụ ọgaranya mmadụ n'ụwa. Ma onye na-ezo n'okpuru pseudonym nke Satoshi Nakamoto ka na-amaghị.
Ihe anyị maara bụ na White Akwụkwọ “Bitcoin: A ọgbọ na-na-ọgbọ Electronic Cash System” e bipụtara n'okpuru pseudonym nke Satoshi Nakamoto on October 31, 2008. Nke a White Akwụkwọ kọwara n'ụzọ zuru ezu decentralized usoro electronic ego, nke achọghị ka ọ bụla ọzọ. Profaịlụ na website nke P2P Foundation na-ekwu na Satoshi Nakamoto bụ a 42-afọ nwa amaala nke Japan, ma na-enye njikọ bitcoin.org. Ná ngwụsị nke 2010, Satoshi mara ọkwa na ọ na-apụ obibi “ihe ndị ka mkpa.” Kemgbe ahụ, e nweghị ọrụ na nnọchite nke Satoshi Nakamoto. Nke a bụ ozi niile na ike ga-atụle pụrụ ịdabere na; ndị ọzọ bụ na ntule na-guesswork.
Nick Szabo – Cryptography, Cryptocurrencies, smart nkwekọrịta
is a famous cryptography specialist and a researcher in theoretical computer science. Ọ bụ ya na-akpa ẹkenam echiche nke “smart nkwekọrịta ” na 1996, nke na-enye ohere ịdị na akụ n'ejighị ọzọ. na 1998, Szabo e mere a usoro maka a decentralized digital ego na-akpọ ya “bit gold.” Ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị keere òkè nke kaadị ahịa tụlee ya Satoshi Nakamoto.
Szabo kwuru ya-emegide SegWit2x, nke a ga-ẹkenịmde ke Bitcoin network ikpeazụ n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọ kọwara ike ndụdụ nke Bitcoin netwọk, Bitcoin Cash, dị ka “centralized sock puppetry.”
ikpeazụ November, Szabo na a na-eme nchọpụta Elaine ma ọ ẹkenam a na-arụ ọrụ na usoro nke na-ezipụ Bitcoin azụmahịa n'elu redio. Nke a na usoro ẹkenam na egbuke gburugburu Bitcoin Conference na San Francisco dị ka a ụzọ iji chebe netwọk si nwere ọgụ nke firewalls, network gateways, ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ na-achịkwa decentralized netwọk na ike ga-eji site na-ekwu ma ọ bụ telekomunikashions ụlọ ọrụ.
na-akasị maara dị ka otu n'ime ndị mbụ bitcoin millionaires, a.k.a. Bitcoin Jesus, nke bụ ihe ijuanya ebe Ver malitere etinye na bitcoin dị ka n'oge dị na 2011. Ọ bụ uru na-arịba ama na Ver bụ nnọọ pụrụ iche nwoke ọbụna site ụkpụrụ nke kaadị ụwa. na 1999, mgbe a afọ nke na-amụ, ọ ama esịn si De Anza College na ihu ọma nke na-eduzi onwe onye azụmahịa. na 2005, enye ama ikpe ọnwa iri n'ụlọ mkpọrọ nke na-ere firecrackers (iwu na-akwadoghị na United States) on eBay. na 2006, Roger kwagara Japan, kwụsịzie American ụmụ amaala. na 2012, ọ ghọrọ otu n'ime ndị guzobere a na-abụghị uru nzukọ, Bitcoin Foundation, na Aims "imaatu, chebe, na-akwalite na ojiji nke Bitcoin ọgbàràùhie ego maka abamuru nke ndị ọrụ n'ụwa nile. "Naa Ver bụ na-elekọta nke cryptocurrency wallets ọrụ, Bitcoin.com
Kemgbe afọ, aha Roger Ver ugboro ugboro pụtara na media ruru ka iwebata ọhụrụ cryptocurrency, Bitcoin Cash, nke o na-akwado nnọọ ike ugbu a. Dị ka echiche ya, Bitcoin Cash bụ a “ezi bitcoin” na-akwado ụkpụrụ nke Satoshi Nakamoto.
bụ ihe nke abụọ kasị ewu ewu na akwukwo maka aha “ezi” Satoshi Nakamoto. na 2011, ọ mepụtara otu n'ime ndị mbụ altcoins, Litecoin, nke pụtara dị ka a n'ihi nke ndụdụ na Bitcoin netwọk. Ndị mmadụ na-ndinọ ekikere esie na Litecoin nwere ike “ọla-ọcha bitcoin si gold.” na 2013, Lee wee ọnọdụ nke oru director na Coinbase, a isi cryptocurrency n'elu ikpo okwu. ma na 2017, o kpebiri ịhapụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na Litecoin nkwalite.
N'ime afọ, na cryptocurrency ọnụego toro ihe karịrị ugboro iri, na taa guzo $255. na December, Charlie Lee mara ọkwa na ọ rere ya nile Litecoins na ọ dịghị onye nwere ike na ebubo ya na-emetụta ndị price fluctuations. O mesiri ya ike na ọ na-ahapụ ngo ma nọgide na-etinye ya nile oge a na-arụ ọrụ.
a bitcoin ahia na ọṅụ na Ex-Vice President na JPMorgan Chase-a maara nke ọma na kaadị obodo. Weiss e weere na otu n'ime ndị mbụ blockchain ozioma akwalite technology ahụ pụta ebe 2013. O nwere ihe ịga nke ọma blog, a podcast, na Youtube Channel, na ndị ọzọ karịa 80,000 na-eso ụzọ na Twitter. CoinTelegraph mgbe ebipụta ya kwuru na ihe. Ọzọkwa, na 2014, Weiss ghọrọ Onyeisi nke Research na BraveNewCoin.
Dị ka Weiss’ nnyocha na-e bipụtara na September gara aga ma na-dabeere na exponential uto nke bitcoin ọrụ, site na njedebe nke 2018, bitcoin price nwere nwere ịka ihe $100,000 akara. na mbụ, Weiss kwuru na, site na njedebe nke 2017, bitcoin-agafe $15,000 akara, nke anyị na-edebe ihe na December 17. Weiss n'ihu ọha criticizes oge a na usoro nke na-azụ ego site ICO, dị ka 90% nke ICO oru bụ “dị nnọọ mama.”
bụ ngalaba-nchoputa nke otu n'ime ndị kasị ibu cryptocurrency oru, Ethereum, na ya na nwa afọ cryptocurrency, ya bụ ether. na 2013, Buterin bipụtara cryptocurrency White Akwụkwọ wuru na blockchain, ebe ọrụ nwere ike iji smart contracts na-enye ha na ọtụtụ ihe pụrụ iche ohere.
Site ná mmalite nke afọ, na ether ọnụego ụba 57 ugboro, na Buterin sonyeere mba nke American Forbes “30 n'okpuru 30.” Bloomberg gụnyere Buterin na ndepụta nke 50 kasị akpa ndị mmadụ na 2017, na Russian Forbes gụnyere ya na ndepụta nke 100 kasị akpa Russia nke narị afọ.
Afọ gara aga, Buterin ghọrọ otu n'ime ole na ole oru buu igba n'ulo onye zutere na President Putin n'oge St. Petersburg Economic Forum. The nkọwa nke mkparịta ụka na-adịghị ekpughe, ma mgbe nke a nzukọ, Russian ọchịchị mere U-na-na blockchain technology na cryptocurrencies, akpọ blockchain ihe na-akpali technology kwesịrị anya. Ọzọkwa, ọ bịara mara na Ethereum aga ẹkedori a nkwonkwo oru ngo na Vnesheconombank (weebụsaịtị); Sberbank sonyeere mba oru ngo Enterprise Ethereum Alliance (EEE), nke ugbua na-agụnye ihe karịrị 200 ụlọ ọrụ, na ghọrọ onye mbụ Russian Bank na EEA.
Gavin Wood – parity Technologies, Ntụpọ
bụ ngalaba-nchoputa na mbụ CTO na Ethereum, onye gbanwee mbụ Ethereum White Akwụkwọ e dere site Buterin n'ime ihe n'ezie na-agba ọsọ omume. Ugbu a Wood isi oche nke ụlọ ọrụ parity Technologies, nke na-amalite software maka blockchain netwọk. Ọ bụkwa ngalaba-nchoputa nke a mmalite Polkadot, nke na-amalite na protocol nke ga-ekwe rụọ network scalability maka a ukwuu ndakọrịta nke onwe na ọha blockchains.
The 2017 afọ gosiri na ya siri ike n'ihi na Wood. Ná mmalite nke afọ, ụlọ ọrụ ọma tọhapụrụ parity 1.5, emelitere Ethereum netwọk ahịa. Ma mgbe a ezi mmalite, na n'etiti afọ, Parity Technologies chere ihu siri ike isi ike.
ikpeazụ July, na wallets na hacked. The hackers hụrụ ahụhụ na nkwekọrịta na multisignature, nke kwere ka ha na-ezu ohi 153,000 ethers (banyere $32 nde n'oge). Parity tọhapụrụ emelitere version nke smart nkwekọrịta iji dozie nsogbu a. Otú o sina, ọzọ dị oké egwu ebe, nke bi ọbá akwụkwọ na-ejisie Baịbụl nke wallets, e achọpụtara na November. Dị ka a n'ihi nke а programmer si ndudue, gburugburu $152 nde e oyi kpọnwụrụ na parity ọrụ’ akaụntụ.
Dị ka Wood, niile ọrụ’ digital akụ echekwara n'elu ikpo okwu bụ kpamkpam mma, ma t bụ ma omume na-sere ha si na netwọk. Ọ bụ uru na-arịba ama na n'etiti oyi kpọnwụrụ akụ bụ $98 nde zụlitere Polkadot mmalite site ICO.
The kasị ewu ewu na nsụgharị nke onye bụ n'ezie n'azụ aha Satoshi Nakamoto na-na-esonụ:
Nick Szabo - a ọkà mmụta sayensị na ubi nke kọmputa sayensị, Cryptography, na iwu, nakwa dị ka a na-eme nchọpụta nke smart contracts na cryptocurrency.
Charlie Lee - Onye Okike nke Litecoin.
Neal King, Vladimir Oksman, na Charles Bry - na ndị patent ngwa, akpọ “Emelite na ikesa ezo igodo.”
Michael Klare - a gụsịrị akwụkwọ na Cryptography na College of Dublin.
Hal Finney - a Cryptography ọkachamara.
Dorian Nakamoto - a nwa amaala nke United States (California) nke Japanese mbido.
Craig Wright - ihe Australian na-azụ ahịa.
Ilọn Musk - a ma ama Billionaire, isi nke na naa na Space X, na a so na Board na SolarCity
All nke ha, ma e wezụga Craig Wright, agọnahụ ha nke mbụ cryptocurrency. ikekwe, ọ bụ ihe magburu onwe mpempe ozi ọma n'ihi na kaadị ahịa n'ihi Nakamoto esetịpụ 5% nke niile bitcoins. Ya mere, Nakamoto, ma ọ bụrụ na chọrọ, ike budata emetụta bitcoin ọnụego na kaadị ahịa.
Ọgwụgwụ nke May puzzl ...